Amandla olusebenzayo noluthembakeleyo kubalulekile ukuqinisekisa ukuba Defense namagqiza zibekho nje ngempumelelo kangangoko kunokwenzeka; compact, transportable, libya-mali yesondlo iiseti generator ukuba kubonelela amandla rhoqo okanye likaxakeka ezifunekayo.
Amandla e-AGG abonelela inika izisombululo amandla ukuhlangabezana neemfuno zobugcisa amaqumrhu amazwe ngamazwe, iiseti wokuphehla umbane kwintsimi izibhedlele kunye neenkqubo zekhompyutha kwiikhempu zomkhosi umyalelo kunye nezithuthi zonxibelelwano.
Enye yeendlela ezibalulekileyo kwizicelo imfazwe akwazi ukondla umbane ezimbini-rhoqo ukuba akwazi ukusebenza kwi kokubini-50 no-60 Hz. Kwakhona AGG Power uqinisekisa izisombululo ungqamaniso yeeprojekthi ezifuna generator eziliqela icwangcisa ukuqhagamshela ngaxeshanye.